Products – Tagged "Portable Hard Drives" – ICT.com.mm
Transcend 25M3S Shockproof Portable Storage 4TBK216,343
Lexar SL200 Portable SSD LSL200X002T-RNNNG (2TB)K585,733
Lexar SL200 Portable SSD LSL200X001T-RNNNG (1TB)K297,817
Lexar SL200 Portable SSD LSL200X512G-RNNNG (512GB)K178,100
ADATA SE800 External SSD USB 3.2 Gen-2 Type-C Blue (1TB)K313,206
Transcend 25M3S Shockproof Portable Storage 4TB
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Military-grade shock resistance SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 compliant Advanced three-stage shock protection system Durable anti-shock rubber outer case Advanced internal hard drive suspension system Slim form...
Lexar SL200 Portable SSD LSL200X002T-RNNNG (2TB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Waiting Time after Order: Utmost (6-8) Weeks ကြာချိန်: အများဆုံး (၆-၈) ပတ် Part Number: LSL200X002T-RNNNG SSD-level performance – with speeds up to 550MB/s read and 400MB/s write Sleek, slimline...
Lexar SL200 Portable SSD LSL200X001T-RNNNG (1TB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Waiting Time after Order: Utmost (6-8) Weeks ကြာချိန်: အများဆုံး (၆-၈) ပတ် Part Number: LSL200X001T-RNNNG SSD-level performance – with speeds up to 550MB/s read and 400MB/s write Sleek, slimline...
Lexar SL200 Portable SSD LSL200X512G-RNNNG (512GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Waiting Time after Order: Utmost (6-8) Weeks ကြာချိန်: အများဆုံး (၆-၈) ပတ် SSD-level performance – with speeds up to 550MB/s read and 400MB/s write Sleek, slimline styling with...
Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 Hard Drive 1TB (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 53200 Capacity: 1TB Interface: USB 3.0 Dimensions: 119mm x 81mm x 14.5mm Product Weight: 158g High speed, high capacity storage. A fast & safe solution to...
HIKVISION HS-EHDD-T30(STD) External Hard Drive 1TB (Gray)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: HS-EHDD-T30(STD) Interface: USB 3.0 Micro B Rotational speed: 5400 rpm Storage Media: 2.5 inch SATA HDD Capacity: 1TB Dimensions (L x W x H): 112.7mm X...
HIKVISION T100I Series Portable SSD 128GB (Pink)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: HS-ESSD-T100I(STD) Capacity: 128GB Interface: USB 3.1, TypeC Up to 450MB/s read speed 340MB/s write speed Higher read/write speed Portable and fashionable appearance Various optional capacities Available...
HIKVISION HS-ESSD-T200N-512G (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: HS-ESSD-T200N Capacity: 512GB Interface: USB 3.1, TypeC More compact Dynamic color Metal case Shock-resistant and Heat Dissipation Support platform: Win/Mac/Linux Support device: Android Phone/Android Tablet/PC/Laptop2years...
Hoco UD7 Extreme Speed Portable SSD (512GB)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: Aluminum Alloy Shell + PCB + ABS Frame Working Voltage and Current: DC5V / 440mA Product Interface: Type-C Support Protocol: USB3.1 Gen2 Max transmission speed 10Gbps...
Hoco UD7 Extreme Speed Portable SSD (256GB)-29
Hoco UD7 Extreme Speed Portable SSD (128GB)-29
ADATA SE770G External SSD USB 3.2 Gen2 Type C (1TB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Capacity: 1TB Interface: USB 3.2 Gen2Type-C RGB Lighting Color: Black Sequential Read(Max): Up to 1000 MB/s Sequential Write(Max): Up to 800 MB/s Dimensions (L x W...
ADATA SE770G External SSD USB 3.2 Gen2 Type C (512GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Capacity: 512GB Interface: USB 3.2 Gen2Type-C RGB Lighting Color: Black Sequential Read(Max): Up to 1000 MB/s Sequential Write(Max): Up to 800 MB/s Dimensions (L x...
Silicon Power Diamond D05 External Hard Drive (2TB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Classic brushed steel iron grey design Diamond D05 Black Edition Super-fast USB3.0 interface – no external power needed Plug & Play operation on Windows and Mac systems...
Silicon Power Diamond D05 External Hard Drive (1TB)
ADATA HV300 External Hard Drive 2TB (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: ADATA Colour: Black Capacity: 2TB Interface: USB 3.2 Stylishly svelte Just when you thought an HDD couldn’t get any thinner, it does. The2TB variant of...
ADATA HV300 External Hard Drive 1TB (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: ADATA Colour: Black Capacity: 1TB Interface: USB 3.2 Stylishly svelte Just when you thought an HDD couldn’t get any thinner, it does. The2TB variant of...
ADATA HD710MPro External Hard Drive 2TB (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: ADATA Colour: Black Capacity: 2TB Interface: USB 3.2 The ADATA HD710M pro is the perfect choice for external storages. Military-Grade anti Shock technology offers durability to the...
ADATA HD680 External Hard Drive 2TB (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: ADATA Colour: Black Capacity: 2TB Interface: USB 3.2 Gen1 ( compatibilidade descendente com USB 2.0 ) Weight: 270 g Military-Grade Protection The HD680 meets the U.S. Military...
Transcend StoreJet 25C3N Portable Hard Drive (2TB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ USB Type: micro USB to USB Type A Connection Interface: USB 3.1 Gen 1 Capacity: 2TB Operating Voltage: 5V Dimensions (Max.): 114.5 mm x 78.5 mm x...